RESTBET497 EROL BULUT'TAN DERBİ ÖNCESİ İDDİALI SÖZLER - RESTBET497.COM GİRİŞ
RESTBET497 EROL BULUT’TAN DERBİ ÖNCESİ İDDİALI SÖZLER
စူပါလိဂ်တွင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုသည်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ Galatasaray Fenerbahce ၏ဒါဘီနာရီကျန်ရှိနေသည်။ Fenerbahçeနည်းပြ Erol Bulut ကဒါဘီပွဲမတိုင်မှီရည်မှန်းချက်ကြီးသောစကားများကိုပြောကြားခဲ့သည်။
ပြိုင်ပွဲမစမီ Erol Bulut က “ငါမရှိဘူး၊ ငါတို့ရှိနေတယ်” ဟူသောဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူကအဝါရောင်နှင့်အပြာရောင်အသိုင်းအဝိုင်းကိုမျှော်လင့်ချက်ပေးသောစကားများလည်းပြောခဲ့သည်။ Erol Bulut “အခုအချိန်မှာပုံစံအခြေအနေတွေကကျွန်တော်တို့ကိုရှေ့ကတစ်ဆင့်တက်သွားမှာပါ။ ဒါပေမယ့်ဒါဘီရဲ့အခြေအနေကကွဲပြားခြားနားတယ်။ ဒီကစားသမားတွေကဒီပွဲစဉ်တွေကြောင့်လှုံ့ဆော်ခံရတယ်။ ဒီအကြောင်းကြောင့်ရလဒ်ကောင်းတွေထွက်လာနိုင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲနှစ်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုအရေးကြီးတဲ့အရာတွေသင်ကြားပေးခဲ့တယ်။ ငါတို့ရှိသမျှကိုအတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားကြလိမ့်မည်။ ။
RESTBET497 EROL BULUT’TAN DERBİ ÖNCESİ İDDİALI SÖZLER RESTBET497 EROL BULUT’TAN DERBİ ÖNCESİ İDDİALI SÖZLER SUPERTOTOBET0120 EROL BULUT’TAN DERBİ ÖNCESİ İDDİALI SÖZLER BETBOO868 EROL BULUT’TAN DERBİ ÖNCESİ İDDİALI SÖZLER BETBOO868 DERBİ ÖNCESİ ALİ KOÇ’TAN SÜRPRİZ KARAR BETBABA138 DERBİ ÖNCESİ ALİ KOÇ’TAN SÜRPRİZ KARAR BETBOO618 DERBİ ÖNCESİ ALİ KOÇ’TAN SÜRPRİZ KARAR SULTANBET516 DERBİ ÖNCESİ ALİ KOÇ’TAN SÜRPRİZ KARAR RESTBET497 FENERBAHÇE’DE SERDAR AZİZ ŞOKU! RESTBET497 MUSTAFA CENGİZ’DEN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER!
8 Comments on RESTBET497 EROL BULUT’TAN DERBİ ÖNCESİ İDDİALI SÖZLER
NAZLI December 1, 2020 at 9:40 am
ERGÜN December 1, 2020 at 11:50 pm
JALE December 3, 2020 at 3:40 am
ŞEYMA MELİHA December 3, 2020 at 4:30 pm
SEYFİ December 8, 2020 at 7:50 am
SAMET SANCAR December 8, 2020 at 8:10 pm
EVREN December 10, 2020 at 4:20 am
SÜLEYMAN December 11, 2020 at 8:10 am
November 24, 2020 RESTBET 497 RESTBET497 17
ပြိုင်ပွဲမစမီ Erol Bulut က “ငါမရှိဘူး၊ ငါတို့ရှိနေတယ်” ဟူသောဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူကအဝါရောင်နှင့်အပြာရောင်အသိုင်းအဝိုင်းကိုမျှော်လင့်ချက်ပေးသောစကားများလည်းပြောခဲ့သည်။ Erol Bulut “အခုအချိန်မှာပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုရှေ့ကခြေတစ်လှမ်းသာသွားမှာပါ။ ဒါပေမယ့်ဒါဘီရဲ့လေထုဟာထူးခြားပါတယ်။ ဒီကစားသမားတွေကဒီပွဲစဉ်တွေကြောင့်လှုံ့ဆော်ခံရတယ်။ ဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်ထူးခြားတဲ့ရလဒ်တွေရှိနိုင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပွဲစဉ်နှစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကိုအရမ်းအရေးကြီးတဲ့အရာတွေကိုသင်ပေးတယ်။ သင့်အားကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့အကောင်းဆုံး “ ။
RESTBET497 EROL BULUT’TAN DERBİ ÖNCESİ İDDİALI SÖZLER RESTBET497 EROL BULUT’TAN DERBİ ÖNCESİ İDDİALI SÖZLER BETBOO868 EROL BULUT’TAN DERBİ ÖNCESİ İDDİALI SÖZLER SUPERTOTOBET0120 EROL BULUT’TAN DERBİ ÖNCESİ İDDİALI SÖZLER RESTBET497 FENERBAHÇE’DE SERDAR AZİZ ŞOKU! RESTBET497 FENERBAHÇE’DE SERDAR AZİZ ŞOKU! RESTBET497 FENERBAHÇE’DE SERDAR AZİZ ŞOKU! BETBOO868 DERBİ ÖNCESİ ALİ KOÇ’TAN SÜRPRİZ KARAR SULTANBET516 DERBİ ÖNCESİ ALİ KOÇ’TAN SÜRPRİZ KARAR BETBOO618 DERBİ ÖNCESİ ALİ KOÇ’TAN SÜRPRİZ KARAR
17 Comments on RESTBET497 EROL BULUT’TAN DERBİ ÖNCESİ İDDİALI SÖZLER
AYŞE CEREN November 24, 2020 at 9:00 pm
BURAK November 25, 2020 at 2:40 am
ALAADDİN November 25, 2020 at 11:40 am
EVRE November 25, 2020 at 2:30 pm
ASUMAN November 26, 2020 at 4:40 am
HASAN November 26, 2020 at 2:10 pm
VOLKAN November 26, 2020 at 4:30 pm
GÖKHAN November 27, 2020 at 11:20 am
ERDİNÇ November 27, 2020 at 7:10 pm
LEYLA November 29, 2020 at 2:00 pm
ONAT November 29, 2020 at 5:50 pm
TURAN December 1, 2020 at 6:10 pm
KERİME RUMEYSA December 3, 2020 at 5:40 am
YAMAN December 4, 2020 at 2:30 am
BİRGÜL December 4, 2020 at 11:00 am
TUBA December 7, 2020 at 9:40 am
ERDEM December 8, 2020 at 8:20 am